IHenan Bensen Industry Co., Ltd
Ngezisekelo ezimbili zokukhiqiza eShanghai naseKaifeng, imboni yethu ihlanganisa indawo engamamitha-skwele angama-20000. Futhi uBensen uqashe abasebenzi abangaphezu kwama-480; Ngaphandle kwemigqa emibili yokukhiqiza iMicrofiber, Siphinde sangenisa imishini ethile yokukhiqiza yobungcweti. Ukwamukela Imodi yokuphatha ejwayelekile, Sithole izitifiketi zohlelo lokulawula ikhwalithi le-ISO9001 kanye nohlelo lokulawula imvelo lwe-ISO 14000. UBensen uhlala esebenzisa umqondo wokwakhiwa kwamanani wamakhasimende wemikhiqizo eyenzelwe ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende ahlukahlukene, futhi ngokuqhubekayo ahlinzeka amakhasimende ngezixazululo nezinkinga zobuchwepheshe. Ukuqhubeka nokuhlola nokwenza izinto ezintsha, nokwenza kahle.
Eminyakeni eyishumi edlule， u-bensen uhlale ebambelela "kwikhwalithi yemikhiqizo ukuze aphile, izinsizakalo zokwethembeka nezentuthuko" ngezinjongo zebhizinisi. Uzibophezele ukukunikeza ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme nezinsizakalo ezisezingeni. Sineqembu elisebenza ngokuzinikela, elinikezelwe, kusuka ekwakhiweni komkhiqizo, ekwakheni isikhunta, ekubunjweni komhlangano woMkhiqizo, ngesici ngasinye nezinqubo zivivinya kanzima nokulawula.
Imikhiqizo yethu eyinhloko ifaka phakathi: isikhumba se-PUV, izikhumba ze-PU, izikhumba zeMicrofiber ezisetshenziswa kakhulu kwizembozo zezihlalo zemoto, ingaphakathi lezimoto, iphaneli lomnyango wemoto, njll iBensen ayinazo nje kuphela izinqwaba ezibanzi zemakethe yokuthengisa yasekhaya, kepha futhi zithunyelwa eYurophu, I-USA, kodwa futhi yathunyelwa emazweni ase-Asia. Futhi ngaphezu kwalokho, siphinde sikhiqize izikhumba zezinto zokupholisa, izikhumba zamakhava ezihlalo zemoto, uhlaka lwemoto phansi nokunye. Sibe yinkampani ehamba phambili emkhakheni wezikhumba zokwenziwa.
Ibhizinisi ngokuqinile ngokuya ngemithetho efanele yombuso, imithethonqubo kanye nemithetho yokuphathwa kwezidingo ze-WTO ngokomthetho, ukubamba iqhaza elibonakalayo ekubambisaneni komnotho kwesifunda, amathemba ebhizinisi nokuhle, ngokuzayo, sizokwandisa isilinganiso sokusebenza nokuthuthuka okungaguquki komnotho wezinkampani , abafuna ngobuqotho abalingani, ukubambisana okuhle kokholo futhi bafune intuthuko efanayo.
Ngaphansi kwesimiso sokubambisana kwe-win-win, uBensen uhlala ehlinzeka ngezinto ezisezingeni eliphakeme, ezisezingeni eliphezulu nezinsizakalo ezihamba phambili, futhi usebenzela ukusebenzisana kwesikhathi eside nawo wonke amakhasimende ethu.